डा. पोषराज पाण्डे | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. पोषराज पाण्डे
on: १७ पुष २०६६, शुक्रबार ००:०० सम्पादकीय 12 views
डा. पोषराज पाण्डे साउथ एशियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भायरोमेण्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनले अर्थशास्त्रमा पीएचडी र बिजनेस म्यानेजमेण्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । डा. पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि भइसकेका छन् । पाण्डेले नेपाललाई विश्व व्यापार सङ्घको सदस्य बनाउने पक्षमा वार्ता गरेका थिए ।
डा. पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सदस्य पनि भएका थिए । उनले बहुपक्षीय व्यापार एकीकरण र व्यापारक्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालस्थित यूएनडीपीमा रहेर काम गरेका छन् । उनका अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका सम्बन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखरचना र पुस्तक प्रकाशित छन् ।
राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको आवश्यकता किन भयो ?
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका छन् । साथै, गाभिने र खरीद गर्ने (मर्जर र एक्विजिशन)सम्बन्धी व्यवस्थालाई समायोजन र व्यवस्थापन गर्दै समय सापेक्ष रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शुरूमा बाफिया लागू गर्दा आउन सक्ने चुनौतीलाई ऐनले सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले यसको संशोधनको आवश्यकता भयो भन्ने लाग्छ ।
ऐन संशोधनका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारको मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रमा बढी स्थायित्व कसरी ल्याउने भन्ने रहेको छ । तर, यसका धेरै पक्ष सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि केही विषयमा भने मेरा फरक धारणा छन् । शेयर प्रवर्द्धकहरूले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन नपाउने भन्ने कुरा ऐनमा आएको छ । उदार अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्त भनेकोे सबैभन्दा बढी जोखिम लिनेले सोहीअनुसारको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसरी सिद्धान्तविपरीत गएर स्वामित्वलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो भने भोलि समस्या आउन सक्छ । अहिले नेपालको शेयरबजार न्यूनतम बिन्दुमा रहेको छ । यदि यो ऐन पास भएको अवस्थामा सबै प्रवर्द्धकले शेयर विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थामा नेपालको शेयरबजार तहसनहस हुन सक्छ । त्यसतर्फनीतिनिर्माताहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैले शेयर स्वामित्वलाई ५ प्रतिशत मात्र राख्ने भन्ने दफा समयसापेक्ष र व्यावहारिक देखिँदैन । सीईओको तलब सुविधाको विषय पनि अहिले उठिरहेको छ । यो राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसलाई ऐनमा नै राख्नु जरुरी छैन । त्यसैगरी लगानीको ५ प्रतिशत गरीबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसमा वाणिज्य बैङ्कहरूले हल्ला मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । आय र अवसरको समान वितरण हुन नसक्दा मुलुकमा अहिले व्यापक गरीबी बढेको छ । निम्न आयस्तर भएको जनसङ्ख्यालाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा लगानीको पाँच प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अनुचित होइन ।
बाफिया संशोधनका सकारात्मक पक्षहरू पनि होलान् नि ?
एउटै परिवारबाट एकभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न खोजिएको छ । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो । एउटा परिवारबाट जतिसुकै लगानी गरेको भए पनि एकभन्दा बढी सञ्चालक बन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । त्यो संस्थाको दीर्घकालीन हितमा पनि हुँदैन । संस्थागत सुशासनका लागि पनि एउटा परिवारबाट एकमात्र सञ्चालकको व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, मर्जर र एक्विजिशनसम्बन्धी व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू आफै पनि आफ्नो पूँजीगत आधारलाई कसरी बलियो बनाएर लैजाने भन्ने कुरामा सजग हुन्छन् । ठूलाठूला योजनामा लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यस्तै, बाध्यात्मक खारेजीको कुरा पनि सकारात्मक छ । कुनै संस्थाहरू नियम-कानूनमा चल्दैनन्, निर्देशनको पालना गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई कमजोर बनाउने काम कुनै निकाय अथवा राजनीतिक दलबाट भयो भने त्यसले राष्ट्रमा ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गर्छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ऐनमा समावेश गर्न लागेको बाध्यात्मक खारेजीको कुरा पनि सकारात्मक छ । तर, व्यापारीले बैङ्क खोल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नेपालका सन्दर्भमा उपयोगी हुँदैन भन्ने लाग्छ । पूँजी भएका व्यक्ति नेपालमा कम छन् । पूँजी घरानासँग नै हुन्छ, उनीहरूलाई बन्देज लगाउनु राम्रो होइन । त्यसो गर्नुभन्दा उनीहरूलाई एउटाभन्दा बढी संस्था खोल्न नदिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
ऐन संशोधनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी छन् । सरकारलाई बढी राजस्व बुझाउनेमा पनि यी क्षेत्र नै अगाडि छन् । त्यसैले यस क्षेत्रलाई अवरोध हुने काम कुनै व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन । देशको आर्थिक विकासका निम्ति यो मूलक्षेत्र हो । ऐन संशोधनपछि यसमा देखिएका केही विकृतिसमेत कम भएर भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेमा दुईमत छैन । सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा पनि नीति र ऐनहरू नआएका होइनन् । तर, तिनीहरूलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेनौं, जसले गर्दा लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न हुने र सोचेजस्तो विकास नहुने स्थिति सृजना भयो । ऐन संशोधन गर्ने कुरा विधायिकाको हो । त्यसैले, ऐन संशोधन गर्दा व्यावहारिक र वास्तविक पक्षलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर राम्रोसँग निर्णय गर्ने हो भने राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ ।
स्थायी र सबल वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि कस्तो कानूनी संरचना आवश्यक छ ?
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि विगतमा धेरै कानून बने । ऐनको अभावले कामकारबाही नै अवरुद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको हाल रहेका ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो । त्यसो भयो भने नयाँ ऐनको आवश्यकता पर्दैन । भएका ऐनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम भयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै विकृति छन् भनिन्छ नि ?
यस क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको संस्थागत सुशासनको विकास हुन नसक्नु नै हो । आफू प्रवर्द्धक भएको संस्थाबाट आफै कर्जा लिने, नक्कली संस्था खोलेर कर्जा लिनेजस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा देखिएका छन् । यसको अन्त्यका लागि कडा कानून आवश्यक छ । गलत काम गर्नेलाई राज्यले संरक्षण दिने होइन, कारबाही गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धक-प्रवर्द्धकबीच नै मिलेमतो गरेर एक-अर्को बैङ्कबाट ऋण लिनेजस्ता कार्य पनि भइरहेको चर्चा छ । त्यो राम्रो होइन । विगतमा पनि धितोलाई अधिक मूल्याङ्कन गरेर कर्जा दिइरहेको स्थिति थियो । त्यस्तो काम बैङ्कको हितमा हुँदैन । धेरै किसिमका खर्च देखाएर लाभ लिने प्रवृत्ति पनि विकृति हो । संस्थागत सुशासनको आभावका कारण पनि यो क्षेत्रमा विकृति आएको छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी दिनमा निरीक्षण र अनुगमनको प्रभावकारितालाई बढाएर कमजोरीलाई निराकरण गर्दै जानुपर्छ । साथै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘म मालिक हुँ’ भन्ने भावनाले होइन ‘सर्वसाधारण जनताको निक्षेपको संरक्षक हुँ’, भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने विकृतिहरू आफै हराएर जान्छन् ।
ऐनले यो क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सम्बोधन गर्छ ?
ऐनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै विकृतिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । तर, बाध्यात्मक खारेजी, मर्जर र एक्विजिशनजस्ता नियमले केही हदसम्म सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्छु । त्योबाहेक राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालतमा
विश्व बैङ्कको रू. १८ अर्ब सहयोग